Razor Waya Fekitori | China Razor Wire Vagadziri, Vatengesi
Concertina reza waya BTO-22 reza mesh 10m pamupumburu
Stainless simbi reza waya 304 zvinhu 500 dhayamita
Welded reza waya pajira riya Diamond reza pajira riya fenzi
Flat kuputira reza waya 15m pane roll 10 m pa roll
Doble tambo yakakoshwa waya
Nharembozha chengetedzo / matatu coil reza waya
Waya pajira riya fenzi welded pajira riya fenzi bindu fenzi
Yenguva pfupi fenzi kuvaka fenzi inotakurika fenzi Canada fenzi
358 chengetedzo fenzi anti kukwira fenzi pani
Tubular fenzi yakarukwa simbi fenzi 1.5m, 1.8m fenzi pani
Tambo yakapetwa yakapetwa kaviri
2.5 mm main waya yakapetwa kaviri str ...
Concertina reza waya BTO-2 ...
Nharembozha chengetedzo / thr ...
Tubular fenzi yakarukwa simbi ...
Waya pajira riya fenzi welded pajira riya ...
Concertina reza waya zvakare inodudza reza waya, reza yakasungwa waya kana reza tepi ect.
Inoshandiswa zvakasungwa mutirongo, nhandare yendege, nzira yemugwagwa, nzvimbo dzekupa mhuka mhuka, nzvimbo dzehondo uye marongero emauto.
Welded reza waya pajira riya rakatwasuka reza yakaomeswa waya, yakasungwa mesh yakagadziriswa, iyo inogona kusunganidzwa kuita dhaimondi, gomba rekona (kuzarura kunogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi), zvakanaka, uye kadhi harigone kukwira pasi, ichivharira simba rakasimba rekudzivirira yakasimba. Inogona kubatanidzwa nedzimwe fenzi uye inogona zvakare kushandiswa yega.
Flat inoputira reza iko kuchinjika kweyechimbi reza chengetedzo, inochinjiswa kuti ishandiswe mune yakazara vanhu mamiriro. Flat chengetedzo chipingamupinyi concertina senge yekudzivirira chengetedzo chipingamupinyi, zvakare chakagadzirwa chakasimbiswa chakakomberedzwa tepi concertina.
Kuvhura: Kureba 10m, Kureba: 1.25m Hupamhi: 1.4m
Kuunganidza: Kureba 1.525m, Kureba: 1.5m Upamhi: 0.7m
Nguva dzekuvhura: vanhu vaviri vanoda masekondi maviri kutenderera.
Concertina reza Waya imhando yerwambo rwakakomberedzwa kana waya yechisvo iyo inogadzirwa mumakoiri mahombe ayo anogona kuwedzerwa sekongiri. Mukubatana netambo yakasara yakavharika (uye / kana reza waya / tepi) uye mapiketi esimbi, inowanzo shandiswa kugadzira zvipingamupinyi zvematare zvechiuto senge pazvinoshandiswa muzvipingaidzo zvevasungwa, misasa yevasungwa kana kudzora mhirizhonga.
2.5 mm main waya yakapetwa kaviri mitsara mina mapoinzi anopisa akanyika kwakakurudzira Barbed waya yefenzi
Tubaba twakagadzirwa nemhando yepamusoro yakaderera kabhoni simbi waya uye yakamonyororwa nemuchina wakazara wewadhi yemuchina.
Yakaomeswa waya inopa yakakura kugadzirwa kurwisa ngura uye oxidation inokonzerwa nemhepo.
Kukwirira kwaro kwakakwirira kunobvumira nzvimbo yakakura pakati penzvimbo dzemadziro.
Xinpan Metal Wire Mesh Zvigadzirwa Co, Ltd.